Atụmatụ - Chain Supply Next
Nextschain bụ otu n'ime usoro azụmaahịa e-commerce kachasị mma iji mee ka azụmahịa azụmaahịa gị zuru ụwa ọnụ tolite.
01 / Ọtụtụ puku ndị na-emeri Ngwaahịa
Inweta ngwaahịa bụ isi ihe ga-eme ka ị nweta ụlọ ahịa na-aga nke ọma. Kwụsị imefusị ego na ngwaahịa ọjọọ, NextsChain goro ọkachamara ka ọ nye ọtụtụ puku ngwaahịa na-emeri iji nyere aka zụta ndị ahịa ka ahịa dị mfe.
02 / Mbupu zuru ụwa ọnụ
NextsChain na ndị ọrụ 300 + zuru ụwa ọnụ na-ewetara gị ọtụtụ nhọrọ mbufe na ntụkwasị obi maka mbupu zuru ụwa ọnụ. Dabere na sistemụ ọgụgụ isi anyị nwere ike ịdị mfe izere igbochi n'oge oge ọrụ dịka Christmas na Black Friday, ka ọ dị ugbu a anyị na-enyekwa nsuso nsuso.
03 / Mezuo iwu na nnukwu
Nwere ike mezuo iwu gị kwa ụbọchị n'ọtụtụ na clicks ole na ole kama otu, anyị ga-eburu ma buputa ngwaahịa ndị ahịa gị ozugbo.
04 / Nchekwa onwe na Ahịa Daily update
Ọ na-enyocha ihe ngwaahịa kwa ụbọchị ma na-eme ka ngwaahịa gị dị larịị ruo ụbọchị ma tinye iwu ọnụahịa iji melite ọnụahịa ihe na akpaghị aka.
05 / Facebook Ads Target Nye
Mgbasa ozi Facebook bụ otu n'ime ahịa ahịa kachasị mma iji bulie ahịa, anyị na-enyekwa ezigbo mgbasa ozi Facebook maka ngwaahịa ọ bụla na-emeri, naanị maka nzube nke inyere ndị ahịa Shopify aka ịbawanye ahịa 10X ha.
06 / Ndenye aha ahia na mbukota
All nchịkọta ga-Ẹnam ekese n'okpuru gị ika aha, na anyị na-enye ahaziri mbukota-enyere gị aka iru gị ika.